तपाईँको नङमा सेतो आकार चिन्ह छ ? जान्नुस यस्को अर्थ – Online Khabar 24
तपाईँको नङमा सेतो आकार चिन्ह छ ? जान्नुस यस्को अर्थ
October 5, 2021 October 5, 2021 by admin admin
समुन्द्र शास्त्रका अनुसार मानव शरीरमा देखिने कालो कोठी वा नङमा देखिने सेतो चिन्हको निकै महत्व हुन्छ ।
शास्त्रका अनुसार नङमा देखिने सेतो चिन्हले शुभ वा अशुभ फल दिन्छ । समुद्रशास्त्रका अनुसार नङमा हुने सेतो चिन्हले मानिसको जीवनका थुप्रै राज खोज्ने कुरा उल्लेख गरको छ । तर, मेडिकल साइन्समा भने नङमा देखिने सेता चिन्ह रग’तको क’मीले हुने कुरा बताएको छ ।
समुद्रशास्त्र अनुसार नङमा देखिने चि’न्हको महत्व
बुढी औँलाको नङमा सेतो चिन्ह समुद्र शास्त्रका अनुसार जुन व्यक्तिको बुढी औलाको नङमा सेतो चिन्ह हुने गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिले व्यापारमा निकै सफलता हात पार्ने गर्दछन् । साथै यो चिन्ह कुनै नयाँ साथी मिल्ने संकेत पनि हो ।
चो’र औलाको नङमा सेतो चिन्ह – चो’र औलाको नङमा सेतो चिन्ह हुनु निकै शुभ संकेत हो । यस्ता व्यक्तिले समाजका निकै ठूलो मान सम्मान पाउने गर्दछन्।साथै यिनीहरुले हरेक काममा सफ’लता पनि प्राप्त गर्ने गर्दछन् ।
मा’झी औ’लाको नङमा सेतो चिन्ह- मा’झी औ’लाको नङमा सेतो चिह्न हुनुलाई निकै शुभ मानिन्छ। शास्त्रका अनुसार यस्ता व्यक्तिलाई सधैँ बाहिर घुम्न मन पर्छ।यस्ता व्यक्ति नोकरी तथा व्यापारका क्षेत्रमा निकै सफल हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति आफ्ना सत्रुसँग बच्नु पर्ने हुन्छ।
रि’ङ फि’ङ्गरको नङमा सेतो चिन्ह- यदी तपाईको रिङ फिङ्गरको नङमा सेतो चिन्ह छ भने तपाई भविष्यमा समाज वा सरकारद्वारा सम्मा’नित हुनुहुनेछ। साथै यस्ता व्यक्तिको यश र प्र’तिष्ठामा पनि वृद्धि हुने गर्दछ। साभार गरियको खबर
Prevसपनामा किन आउँछन् स्वर्गवास भयका अाफन्त या अन्य मानिसहरू ? यस्ताे छ कारण
nextकेवल १ लाख ६० हजारमा आफ्नै श्रीमतीलाई भारतको कोठीमा !